N'ogbe echebe uwe Netting Manufacturer na Supplier | Atụrụ Atọ
Ogwe aka nchekwa nchebe dị mma maka nchedo ngwaahịa na nkewa nke ngwaahịa na usoro niile, njikwa, mbupu na ngwa nchekwa. Diamonddị diamond ahụ na-emeghe ntupu na-ekpochapụ mmiri mmiri, si otú a na-echebe megide nchara na corrosion. Nchekwa agaghị emebi, gbochie mmebi nke ihu elu. A pụkwara iji maka nkwakọ ngwaahịa nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, dị nkenke ma mara mma ma dịkwa mfe ibu.
Mgbanwe polyethylene netting na-adọkpụ na-adị mfe karịa ihe dị egwu.
Nchebe maka karama mmanya, mpempe akwụkwọ ọla, ifuru, ahịhịa etemeete, wdg.
All Size ngwaahia
Pee ntupu uwe Net na-agbanwe tubular echebe Net
Ihe: Plastic, Pee Avirulent Insipidity
1. Soft polyethylene, kọmpat, mfe iji chekwaa, ndụ ogologo
2. Reuse na egweri, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi.
3.High mgbanwe, nwere ike ịbụ ụdị ọ bụla iji dabaa akụkụ ma ọ bụ ngwaahịa.
4.Can ga-ahaziri dị ka ndị ahịa mkpa dị iche iche nha.
Adabara casing dayameta 6mm-600mm dayameta ngwongwo, ntupu size 3mm-30mm, net nke gram kwa mita, ntupu waya n'obosara, ntupu size, nwere ike gbanwee n'oge mmepụta. Nwekwara ike ịmepụta dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị, akụkụ ngwaahịa ahụ nwere ezigbo elasticity.
Ntọala Ngwaahịa Ngwaahịa
Nkebi Nke Obosara Ntupu size arụ ọrụ φ gsm / m
Nke gara aga: Ngere Screen
Osote: Onyunyo Akwa